သင့်အလှည့်လာပြီ NLD | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Interview with Buddhist Monk on Building Trust Among Religions in Myanmar
“စစ်တိုက်တတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ နေရာတိုင်း ဆရာကြီးဝင်လုပ်နေလို့ ဆီလျော်မလား?” »
U Aung Tin
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စကတည်းက NLDကုို အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့တယ်။
မွတ်စလင်နဲ့ အစ္စလာမ်က မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကုို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တဲ့ သမိုင်း အရင်ကလည်း မရှိဘူး။ အခုလည်း မရှိဘူး။ နောင်လည်း မရှိဘူး။ မြန်မာမွတ်စလင်လူ့အဖွဲ့အစည်းက တရားဥပဒေလေးစားတဲ့ တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် တုိုင်းကြုိုးပြည်ဆောင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာခေါင်းစဉ်နဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်နေတာက လူထုကုို မှိုင်းတုိုက်၊ လူထုထောက်ခံမှု ရယူပြီး နောက်ဆုံးမှာ လူထုအားနဲ့ NLD ကုို ဆန့်ကျင်လာမှာဖြစ်လို့ အစွန်းရောက်အယူအဆတွေကုို လူထုထဲမှာ အညွန့်အညှောင့် ပေါက်ခွင့်မပေးနဲ့။ မြွေပွေးကုို ငယ်သည်ဟု အလမ္ဗါယ် မပြနဲ့ဆုိုတဲ့ စကားလုံးကိုလည်း သုံးပြီး အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့တယ်။
အာဏာရှင်စနစ်က ဒီမိုကရေစီကုို မတတ်သာလုို့ ပြောင်းရတဲ့နုိုင်ငံအားလုံးမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူထုကုို မှိုင်းတုိုက်ပြီး အာဏာရှင်တွေဟာ အာဏာကုို ဆက်ယူသွားတဲ့ သာဓကတွေကုိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပြခဲ့တယ်။
ဒါလည်း မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး၊ အကြမ်းဖက်ရေးတွေ လူသိရှင်ကြားလုပ်နေလို့ ကမ္ဘာကတောင် ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေတဲ့ ၉ ၆၉ ကုို NLDက လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းပါတဲ့။ ပါတီဝင်တုိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပါနုိုင်ပါတယ်ဆုိုပြီး မြှောက်တောင်ပေးခဲ့တယ်။
NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ အမြင်တုိုမှု၊ အမျှော်အမြင် နည်းပါးမှုကြောင့် လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLDက ပြည်ခုိုင်ဖြိုးနဲ့ တုိုက်ရမဲ့အစား မဘသနဲ့ မြေပြင်ပေါ်မှာ နပမ်းလုံးရတော့မယ်။
အခုတောင်ကြီးမှာဖြစ်တာ အစလေးဘဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်အများကြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ လာတော့မယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးက စင်ပေါ်ကနေပြီး တုိုက်ပွဲကုို ထုိုင်ကြည့်၊ အလောင်းကောက်နေရုံဘဲ။
လူထုကလည်း တည်ငြိမ်မှုကုို ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ တစ်ခုတည်းသောပါတီကြီးအဖြစ်နဲ့၎င်း၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် (ခြိမ်းခြောက်တာ၊ လာဘ်ထုိုးတာ၊ ရာထူးနဲ့ဆွယ်တာတွေလည်း ပါမယ်) နောက်ဆုံးရွေးစရာမရှိ ပြည်ခုိုင်ဖြိုးကုို မဲပေးကြရမယ့် အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်သွားနုိုင်တယ်။
အာဏာရှင်စနစ်က ဒီမိုကိုပြောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ နုိုင်ငံတုိုင်း တစ်ခုမကျန်မှာ မဲလိမ်၊ မဲခုိုး၊ မဲညစ်၊ ခြိမ်းခြောက်၊ လာဘ်ထုိုးတာတွေ အမြဲရှိနေတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်မှာလည်း ကြိမ်းသေရှိနေမယ်။
လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ခံလိုက်ရပြီးတော့မှ ကယ်ပါ၊ ယူပါ၊ ဟိုတုိုင်၊ ဒီတုိုင်နဲ့ အလောင်းပုိုက်ဆွေးနေရင်လည်း သိပ်နောက်ကျသွားပြီ။
ကမ္ဘာကြီးက တည်ငြိမ်မှုကုို အဓိကထားပြီး တပ်မတော်အစုိုးရကုို ဆက်လက်ထောက်ခံ အသိအမှတ်ပြု၊ ဆက်ဆံသွားကြတော့မယ်။
၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိမ်လို့ ရှုံးရှုံး၊ ခြိမ်းခြောက်လုို့ ရှုံးရှုံး NLD ရှုံးခဲ့ပါက ဒေါ်စုအနေနဲ့ တာဝန်သိရင်၊ တာဝန်ခံတတ်ရင် ပါတီဥက္ကဌအဖြစ်က ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ နှုတ်ထွက်ဖို့ဘဲ ရှိတယ်။
လူထုလက်ခုပ်တီးတာ နုိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူး။
ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို လူထုက လောလောဆယ် သဘောမပေါက်သေးလို့ မကြုိုက်ရင်လည်း လူထုကုို လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးရဲတာကမှ နုိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်။
This entry was posted on April 15, 2015 at 2:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.